Iko iriko kona yakafa yeserver chassis yekugadzirisa - Goldenor Electronic Technology Co, Ltd.
Imba > Nhau > Indasitiri Nhau > Iko iriko kona yakafa yeserver chassis yekugadzirisa
Iyo sevha chassis mhando yeyakaenzana "unokosha" michina nemidziyo. Kazhinji, inofanirwa kugara iine guruva uye ichichengetwa kuitira kuti muchina ugone kushanda nemazvo. Muchokwadi, isu tinowanzo tarisa dzimwe nzvimbo panguva yekugadzirisa, saka ndedzipi dzakafa magumo ekuchengetedza kwedu? Tarisa uone iro zano rehunyanzvi hwekuchengetedza vanachipangamazano.
Kune rimwe divi, iko kurapwa kwekupisa kupisa uye mweya wekudzimisa kubva kuseva chassis. Iyo radiator yakakosha kwazvo kumubati, nekuti muchina unogadzira yakawanda dhata panguva yekushanda, iyo inogadzira kupisa kwakawanda, saka inofanira kuparara munguva. Kazhinji, guruva chete kunze kwemubati rinobviswa panguva yekugadzirisa, asi guruva pane fan harina kujeka munguva. Kuunganidzwa kweguruva-kwenguva refu kunokanganisa muchina.
Yechipiri ndeyekutanga kugadzirisa kweiyo server chassis. Muchokwadi, hapana chakakosha kutarisirwa kwezuva nezuva kugadzirisa kweye server server, sekureba sekunge isingagashi chakakomba kukanganisa, inogona kushandiswa zvakajairika. Kubvisa guruva panguva yakakodzera mazuva ese, uye kubviswa kweguruva zvemukati kunogona kuona kushandiswa kwemuchina.
Yapfuura:Maitiro ekusiyanisa kana iyo indasitiri yekudzora chassis isiriyo
Tevere:Nguva dzose chengetedza kesi yevhavha kuti uve nechokwadi chehupenyu hweMugadziri wako